Saturday September 13, 2014 - 11:31:25 in Wararka by
Boqolaal kamid ah dad weynaha magaalada Hargeysa ayaa buux dhaafiyay masjidka si ay uga faa’iideystaan mawaadiicda waaqiciga ah ee uu mar walba Sheekhu kusoo qaato Khudbaddiisa.
Sh/Sunne ayaa ka hadlay fadliga uu leeyahay qofka Shahiidka ah ee loo dilay Allaah darti, isagoo soo qaatay aayado Qur’aan ah iyo Axaadiiht arintan la xiriira.
Dhacdadii dhawaan ay Mareykanku ku beegsadeen Sh/Abu Zubeyr Amiirkii Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayuu dul mar ku sameeyay, wuxuuna dadka muslimiinta ah u muujiyay waxa maanta Mareykan qiyaadada ku dilayo.
Wuxuu Sheegay in Mareykan maanta taagan yahay booskii Fircoon maadaama uu leeyahay "aniga ha iga amar qaateen dadka dunida ku nool” taasoo buu yiri’ ku sababi doonta halaagii fircoon ku dhacay.
Dadka muslimiinta ah ayuu Sheekhu ugu baaqay iney ku samraan dhibka ay gaalada kala kulmayaan, maadaama iyaguba dhibaatoonayaan sida uu Allaah ku sheegay suuratu Aala Cimraan.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu muujiyay in Sheekh Abu Zubeyr aanu u dhiman sida fulayda iyo xayawaanka, balse uu maray qaabkii ay u shahiidi jireen geesiyaashii islaamka Sida Xamza Bin Cabdilmuddalib.
Gaalada ku digatay iyo kuwa la fakarka ah ee Qur’aanku sheegay ayuu Sheekhu u sheegay in dadka ay dilkooda ku faanayaan ay yihiin kuwa markii horaba u bareeray oo bannaanka isi soo dhigay, halka iyagu yihiin kuwa shub iyo dabaabaad ku jira oo fulaynimo la degtay, wuxuuna wax ku dareensiiyay gabay ” NINKI DUNIDA LOO DEYNAYAA HAYGU DIIRSADO, WAA WIXII DABAAL DAGAY ANOO GAAL ISOO DILAY, WAA WADA DAMIIN AAN OGEYN DABINKA HOOS YAALLA”.
Ugu dambeyntii wuxuu Sheekhu khudbadiisu kusoo qaatay sida uu Allaah muslimiinta ugu amray iney diyaar garoobaan oo u tababartaan gaalada, wuxuuna dhammaan muslimiinta ku dhiira galiyay in sey tahay ay u gutaan fariidadaas si loo gaaro nolol aduunyo oo cizi ah ama mid aakhiro oo baraare ah.
Wuxuu sheegay in maanta dhibaato lagu hayo muslimiinta meel walbana lagu ugaarsanayo, isagoo tusaale usoo qaatay sida imika Mareykan, Yahuud iyo Shiico ay isugu bahaysanayaan muslimiinta Sunniyiinta ah ee Ciraaq, wuxuuna hadalkiisa kusoo xiray duco.
Halkan Ka Dhageyso Sh/Aadan Sunne MP3